के प्रधानमन्त्री ओली पदबाट राजिनामा देलान त ?अन्तारवार्ता गरे यस्तो घोषणा। – Namaste Dainik
August 13, 2020 NamastedainikLeaveaComment on के प्रधानमन्त्री ओली पदबाट राजिनामा देलान त ?अन्तारवार्ता गरे यस्तो घोषणा।
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाल पार्टीभित्र जारी गतिरोध पाँच दिनभित्र अन्त्य हुने घोषणा गरेका छन्। एपी-वान टेलिभिजनबाट बुधबार राति प्रसारित ‘द ब्राभो डेल्टा शो’मा पत्रकार भूषण दाहाललाई दिएको अन्तरवार्तामा ओलीले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
हाल खिचातानीकाबीच बढिरहेको पार्टीभित्रका सम्बन्धहरू हप्ता-दश दिनमा गाँसिनेछ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिदैं प्रम ओलीले यस्तो बताएका हुन्। ‘कति दिन भन्नुभयो तपाईंले ? हप्ता दश दिन होइन, हप्ता भन्दा यतै पाँच दिनमा फेरि मसँग प्रश्न गर्नुस्, के हुन्छ सिनेरियो। भोलिबाट एक भनेर काउन्टडाउन सुरू गर्नुहोला’, अन्तरवार्तामा उनले भने।
उनको यो घोषणापछि के उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिने तयारी त् गरेका छैनन् ? भन्ने कौतुहलता समेत धेरैका मनमा उब्जिएको छ । अन्तरवार्तामा उनले पार्टी फुटाउन लागेको देखि गुट चलाएको भन्ने चर्चालाई अस्वीकार गरेका छन्।
‘म माओवादीलाई समेत एउटै धारमा ल्याउने मान्छेले गुट चलाएको देख्नुभयो ? गएको चुनावमा एउटा गुट चलाएको देख्नुभयो कि मेचीकाली अभियान चलाएको देख्नुभयो ? मेचीकाली जनसागर उर्लेको देख्नुभयो ? देश ड्राइभ गर्न हिँडेको मान्छे सानो गुट चलाएको देख्नुभयो ? म संसदीय दलको नेता पनि निर्वाचन जितेर आएको हुँ। अध्यक्ष पनि लडेर भएको हुँ। म भन्दा अघि त लड्ने चलन थिएन नि। लोकप्रिय मान्छे अगाडि बढ्न दिने चलन थिएन।’
यसैगरी उनले तात्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग आधा-आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व लिने सहमति भएको भएपनि पछि पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व आफूले लिने सहमति भएको र त्यो सहमति दहाल स्वयंको प्रस्तावमा भएको बताए।
‘हामीले बीचमा थप केही सम्झौता गर्‍यौं। सहमति थप गर्‍यौं, बनायौं। मेरो तर्फबाट कुनै डिमान्ड छैन। जो थप सहमति भए ती प्रचण्डजीले नै भन्नुभएकाले भएका सहमति हुन्। मेरो तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको सहमति होइन। त्यो उहाँले (प्रचण्ड) पनि पटक– पटक भन्नुभएको छ। हामीले के भन्यौं भने पाँच वर्ष नै यो सरकार रहन जरुरी छ’, अन्तरवार्तामा उनको जवाफ थियो।
त्यसैगरी उनले पार्टीभित्र देखिएको समस्यासम्बन्धी प्रश्नमा जवाफ दिदैं त्यो खासै ठूलो समस्या नभएको बताएका छन्। ‘म तपाईंलाई भनिरहेको छु– पार्टीभित्रको समस्या कुनै ठूलो समस्या होइन, यसलाई हामीले समाधान गर्न सक्छौं, गर्नुपर्छ। देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, भावनालाई हेर्नुपर्छ, त्यसलाई कदर गर्नुपर्छ र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म कसैप्रति आरोप लगाइरहेको छैन। अस्ती पत्रकार सम्मेलन भयो, मैले कुनै जवाफ पनि दिइनँ।
असार १० बाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग भएपछि विभाजनको डिलमा पुगेको सत्तारुढ नेकपाको विवाद मिलाउन दुई अध्यक्ष बिहिबार पुनःवार्तामा बसेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको बुधवाको अन्तर्वार्तालगत्तै दुई अध्यक्ष र सहयोगी नेताहरुसहितको वार्तामा समाधानका विकल्पमाथि छलफल सुरु भएको हो ।
नेकपाका एक प्रभावशाली नेताका अनुसार अहिलेको केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गरेर चैतमा महाधिवेशन गर्ने गरी समाधान खोजिँदैछ । दुवै अध्यक्षलाई संयोजक बनाएर महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गर्ने वा एकजनालाई मात्र संयोजक बनाउने भन्नेमा बहस चलिरहेको छ ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई एक पद छाड्न दबाब दिइरहेको छ । उनीहरुले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिए पार्टीको बहुमतले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने दबाब पनि दिइरहेका छन् । यही कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमै जान छाडेपछि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ ।
प्रधानमन्त्रीले दुबै पद नछाड्ने र महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर जाऔं भन्ने प्रस्ताव ओली समूहले ल्याएको संस्थापन इत्तर पक्षका नेताहरुको भनाइ छ । तर,प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै अजको पाँच दिनमै नेकपाको विवाद समाधान होला त ? यसको ‘काउन्ट डाउन’आजैबाट सुरु भएको छ ।